नेकपा (एमाले) सर्लाहीका अध्यक्ष रेवती पन्तले भने “सर्लाहीमै वाम गठबन्धनको पत्ता साफ हुन्छ” – Sanghiya Online
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) सर्लाहीका अध्यक्ष रेवती पन्तले वाम गठबन्धनको नाममा वितरण भएको सिट बाँडफाँट न्योचित नभएको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कमा सोमबार बिहान पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अध्यक्ष पन्तले वाम गठबन्धनको भावनाअनुसार टिकट वितरण नभएको दाबी गरेका हुन् । ‘सिट बाँडफाँटको निर्णयले कार्यकर्ताहरू निरास भएका छन्’, उनले भने, ‘६०–४० को सिट वितरण दुबै पार्टीको हितमा छैन । एमालेले जित्ने ठाउँमा माओवादीलाई दिइएको छ । माओवादीले जित्ने ठाउँमा एमालेलाई टिकट दिनु घोर अन्याय हो ।’
अध्यक्ष पन्तले भने, ‘मेरै जिल्ला सर्लाहीमा टिकट वितरण अवैज्ञानिक छ । सर्लाहीका बारेमा मैले पेस गरेको रिपोर्ट विपरित निर्णय भएको छ । कसको रिपोर्ट लिएर सिट बाँडियो ?’ तपाईले टिकट नपाएपछि विरोध गर्नुभएको हो भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा सर्लाही एमालेका अध्यक्ष पन्तले भने, ‘पार्टीले टिकट दियो भने उम्मेदवारी दिने, होइन भने नीति सिद्धान्त मानेर जाने हो ।’
सर्लाही वाम गठबन्धनले कति सिट जित्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘यस्तै ताल हो भने वाम गठबन्धनले वितरण गरेको निर्णयले सर्लाहीमा एउटा पनि सिट नआउने अवस्था आउँछ ।’ त्यसो भए वाम गठबन्धनको उम्मेदवारहरूलाई हराउन लाग्नु हुन्छ है ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष पन्तले भने, ‘पार्टीले सिनोलाई बोक्न भन्यो भने पनि मास्क लगाएर अत्तर छर्केर सिनो बोक्नु पर्छ । केन्द्रबाट वाम गठबन्धनको नाममा सिनो नै बोक भन्यो भने बोक्नै पर्छ ।’
वाम गठबन्धनका नाममा एमालेभित्र लामो समयदेखि संघर्ष र संगठन गरेका नेताहरूलाई ठूलो नोक्सान भएको पन्तले बताए । उनले भने, ‘अबसर पाउने बेला सही हिसावले प्रयोग गर्न पाइएन । यस्तो भएपछि कसरी निर्वाचन जित्न सकिन्छ ।’ सर्लाहीको ३ नं. क्षेत्रमा माओवादीका रामेश्वर राय यादवले जित्नु हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा एमालेका अध्यक्ष पन्तले माओवादीका उम्मेदवारले ३ नं. क्षेत्रमा जित्ने विषयमा आफू धेरै आशावादी नरहेको बताए । ‘जनताको भावना बुझ्दा माओवादीको उम्मेदवारलाई जिताउन सकिने जस्तो लाग्दैन’, उनले भने । सर्लाहलीको ३ नं. क्षेत्र हालै एमालेमा समाहित भएको पार्टी चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीको पनि बर्चश्व रहेको क्षेत्रमा पर्छ ।
सर्लाही क्षेत्र नं. ३ वाम गठबन्धनले फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी छाडेर केही हप्ता अगाडि माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका रामेश्वर राय यादवलाई टिकट दिने निर्णय भएपछि सर्लाही एमालेभित्र चर्को असन्तुष्टि रहेको छ । सो क्षेत्र एमालेको दब्दवा रहेको क्षेत्र हो । ३ नं. क्षेत्रबाट अध्यक्ष पन्तको नाम सिफारिस भए पनि उनको नाम काटेर रायलाई दिइएको छ ।
एमालेको पकड रहेको सर्लाहीको ३ नं. क्षेत्र माओवादीलाई दिने सहमति भएको थाहा पाएपछि निर्णय सच्याउन दवाव दिन सर्लाहीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू राजधानीमा जम्मा भएका छन् । उनीहरूले सो निर्णयलाई सच्याउन शीर्ष नेताहरूलाई दवाव दिइरहेका छन् ।
कांग्रेसमा पहिरो जान शुरु, निर्वाचित वडा अध्यक्षसहित दर्जनौले गरे पार्टी परित्याग, सयौ लाइनमा